Ụlọ oval achịcha nkata - Outilsdecuisine.com
Welcome » Nri nkata oval oval
Nri nkata oval oval
13X6cm-Gburugburu - € 20.00 EUR 18X9cm-Gburugburu - € 36.40 EUR 21X7cm-Gburugburu - € 36.45 EUR 22X8.5cm-Gburugburu - € 41.45 EUR 25X8.5cm-Gburugburu - € 47.70 EUR 21X15X8cm-Oval - € 36.60 EUR 25X15X8cm-Oval - € 42.35 EUR 28X14X8cm-Oval - € 45.15 EUR
Akara a ma ọ bụ oval nke a na-eji omenala eme ihe dị mma maka inye ụdị dị iche iche nke pastry.
A na-eme nkata nke rattan nke na-eguzogide ọgwụ kpuchie ya. Nke a na atụmatụ-enye ngwaahịa na-ugbu na tebụl gị ma-adabara ndị counter gị na-eme bred ma ọ bụ kọfị na a aka nnọọ Devid agụghị ndị gbara.
Na n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ojiji, nri arịa bụ kemfe maka akwadebe mgwakota abịa kwadebere ma otu ugboro dechara, i nwere ike ọcha ya mfe n'okpuru na-agba ọsọ mmiri na a obere ahịhịa kpamkpam wepu residues fọdụrụ.
nkata na-edozi ma na-achọ mma na oge
ihe na-ekpochapu nke nwere ike iwecha ma weghachite
Rattan mfe ọcha
Ụdị 2 dị: gburugburu na oval.
Ọtụtụ nha maka: x 15 8 5 cm x (S) / x 17 12 6 cm x (M) / x 21 15 8 cm x (L) / x 25 15 8 x cm (XL)